Safiirka Midowga Yurub oo fariin u diray haweenka Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Safiirka Midowga Yurub oo fariin u diray haweenka Soomaaliya
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolás Berlanga ayaa fariim dhiiri-galin ah la wadaagay haweenka Soomaaliyeed, kuwa Yurub iyo Guud ahaan haweenka Adduunka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Nicolás Berlanga ayaa fariintiisa oo dhiira-galin ah ku soo aadiyay maalita caalamiga ah ee haweenka adduunka, taas oo la qabto Siddeeda bisha Maarso sanad kasta.
“Yurub iyo Soomaaliya waxa ay muhiim u arkaan in ay dumarku kaalin ku yeeshaan bulshada, Midowga Yurub, waxa ay hambalyo u dirayaan haweenka Soomaaliueed”, ayuu yiri Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolás Berlanga.
Sanad kasta maanta oo kale dunida oo dhan waxaa ka dhaca isu soo baxyada wacyigelinta takoorka ka dhanka ah haweenka si loo xuso Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka.
Maalintaan oo la xusayay in ka badan hal qarni ayaa ka dhalatay kadib markii ay billabatay in loo dabaal dego maalinta ururka u dhaq dhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha Mareykanka.
Maarso 18, 1917-kii in ka badan 50,000 oo ah haween u dhashay dalka ruushka ayaa sameeyey shaqa joojin afar maalmood ah si ay ugu baroor diiqaan askartii lagu laayey dagaalkii koowaad ee dunida ka dhacay 1914-kii taasoo keentay in uu hogaamiyihii boqortooyada Ruushka jagada ka dago, haweenkana loo ogolaado xaqa ah in ay codeyn karaan.
Wixii intaa ka dambeeyey, wadamada caalamka ayaa bilaabay in ay u dabaal degaan maalinta haweenka caalamka ee 8 Maarso.
Cabsi laga qabo caabuqa coronavirus awgeed lama filayo in ay maanta dhacaan isku soo baxyo waaweyn iyo kulamadii la qaban jiray.